Soosaarka warshad dufcadda fiiqan oo Shiinaha ah | Jusheng
Warshadda Dufcadda Gawaarida otomatiga ah
Iswaafajinta Dufcadda la Taaban karo
Dufcaddii la taaban karo iyo Warshad isku qasid
Conveyor Connection Dufcaddii la taaban karo
Qalalan Isku Qasan Dufcaddii La Taaban Lahaa
Mini Shukaansi Dufcaddii Plant
Isku Darka Diyaargarowga Dhirta La Taaban karo
HZS taxanaha isku darka la taaban karo ee la taaban karo waa a waa soosaar adag iyo qalab tayo sare leh oo soo saari kara noocyo kala duwan oo shub ah. Iyada oo wax ku ool ah wax soo saarka sare, waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in dhismaha weyn oo dhexdhexaad ah, injineernimada axial wadada iyo warshadaha lagama maarmaanka u ah soo saarida wax soo saarka la taaban karo. Waa qalab ku habboon soo saarida shubka ganacsiga. Nidaamkeeda isku-dhafan wuxuu qaataa mashiinka mashiinka qasabka ah ee qasabka ah, kaas oo leh isku-dhafnaan isku-dhafan oo wanaagsan, waqti isku-dhafan oo gaaban, nolosha muddada dheer ee qaybaha xirashada, iyo hawlgalka iyo dayactirka habboon. Waxay qaadataa tiknoolajiyada ugu dambeysa ee kontoroolka sida nidaamka miisaanka elektarooniga ah, xakamaynta kumbuyuutarka iyo muujinta dhijitaalka ah Qalabka miisaanka elektarooniga ah waxaa lagu qalabeeyaa aalado kayd ah iyo shaqooyin magdhaw otomaatig ah, oo leh saxnaan cabbir sarreeya. Nidaamka quudinta ciidda iyo quruuruxu wuxuu qaataa suunka ballaadhan ee herringbone ee quudinta waxaana lagu qalabeeyay waddooyinka. Waa xulasho habboon tiro badan oo unugyada dhismaha ah si ay u soo saaraan shubka ugu fiican.
DKTEC waxay si fudud ula kulmi kartaa baahida macaamiisha iyada oo loo marayo dhirta isku dhafan ee la taaban karo ee awooda iyo qeexitaanka kala duwan.
Waxay leedahay noocyo kala duwan oo ah qalabka dufanka ee la taaban karo ee la taaban karo, iyo awoodda wax soo saar ee wax lagu miiro ay u dhaxeyso 60m³ / h ilaa 180m³ / h. Waxaan sidoo kale u habeyn karnaa xalalka iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, emaylkeena: sales@dongkunchina.com
Intaa waxaa dheer, isla warshadda isku-dhafka ah ee isku-dhafan ee isku dhafan oo leh laba isku-darka, awoodda wax-soo-saarku waxay gaari kartaa 240 mitir cubic / saacad iyo 360 mitir cubic / saac.
Shayga Cutub HZS25
Wax soosaarka aragtida m³ / h 25
Soosaarka fiicni m³ 0.5
Nooca quudinta Duufaan qaadista
Qaabka bakhaarka m³ PLD800
Batcher (mugga halkii bin) m³ 3
Batcher (qaddarka qashinka) pc 4
Awooda fiicni kw 18.5
Awood qaadista kw 5.5
Dhererka dheecaanka m 1.5 / 2.7 / 3.8
Isugeyn kg 1500 ± 2%
Wax budada ah kg 300 ± 1%
Bamka biyaha kg ± 1%
Bamka lagu daro kg ± 1%
Shayga Cutub HZS35
Wax soosaarka aragtida m³ / h 35
Awooda fiicni kw 30
Awood qaadista kw 7.5
Isugeyn kg 2000 ± 2%
Wax budada ah kg 500 ± 1%
Shayga Cutub HZS60
Wax soosaarka aragtida
Batcher (mugga halkii bin)
Batcher (qaddarka qashinka)
Awoodda gudbiyaha suunka oo janjeedha
Miisaanka oo dhan
Aragti (L × W × H)
Max miisaamaya Sugnaanshaha Isugeyn
1200 ± 2%
800 ± 1%
Wax budada ah
500 ± 1%
250 ± 1%
Waxyaabaha lagu daro
20 ± 1%
Shayga Cutub HZS90
39.5 × 18 × 20.7
Max miisaamaya Sugnaanshaha
2400 ± 2%
600 ± 1%
350 ± 1%
Shayga Cutub HZS120
38 × 26 × 22
3600 ± 2%
1200 ± 1
Shayga Cutub HZS180
45 × 20 × 22
4800 ± 2%
1600 ± 1%
100 ± 1%
HZS taxanaha isku darka la taaban karo ee la taaban karo wuxuu ka kooban yahay nidaamka isku qasida, nidaamka wax soo saarida walxaha, nidaamka miisaanka iyo nidaamka xakamaynta korantada Waxay ku habboon tahay goobaha waaweyn iyo kuwa yaryar ee dhismaha, dhirta wax soo saarka shubka ah ee dhirta iyo dhirta wax soo saarka.
Nidaamka isku qasida
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka mataanaha ah wuxuu leeyahay awood isku-qasid xoog leh, tayo isku-dhafan oo isku-dhafan iyo wax-soo-saar sare. Waxay leedahay saameyn isku dhafan oo wanaagsan oo la taaban karo oo qallalan, qallafsanaan semi-qalalan, baaxad iyo qiyaaso kala duwan. Nidaamka saliidaynta iyo nidaamka usheeda dhexe ee usheeda dhexe ayaa dhamaantood laga keenay baakidhka asalka ah, iyo habka furitaanka albaabka Haydarooliga wuxuu hagaajin karaa furitaanka albaabka dheecaanku sida loogu baahdo. Mashiinka isku dhafan ee mashiinka isku dhafka ugu weyn wuxuu qaataa tiknoolajiyada anti-adhesion si uu si wax ku ool ah uga hortago agglomeration ee sibidhka usheeda dhexe. Khatimidii dhamaadka usheeda dhexe waxay qaadataa qaab-dhismeed isku-dhafan oo kala duwan si wax ku ool ah looga hortago qulqulka madaafiicda loona hubiyo hawlgalka joogtada ah iyo muddada-dheer ee nidaamka isku-dhafka oo dhan. Nidaamka nadaafadda wuxuu qaataa bamka biyaha cadaadiska sareeya ee xakamaynta otomaatiga ah iyo xakamaynta gacanta, Godadka godadka biyuhu waxay si toos ah uga sarreeyaan dunmiiqa isku darka, taas oo hagaajinaysa waxtarka isku darka, waxay kordhisaa ceeryaanta biyaha, waxay yareysaa wasakhda boodhka waxayna si wax ku ool ah uga saareysaa isku darka sibidhka. Waxay ku habboon tahay dhismaha ballaaran, shirkadaha shubka ah ee ganacsi, iwm.
Mashiinka-Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Isugeynta Nidaamka Dufcadda
Xulo mashiinka wax lagu rido; habka quudinta waxaa loo qaabeeyey qaab "wax soo saar" ah waxaana lagu quudiyey suunka qaada; waxay qaadataa laba habab oo ah walxaha qofka lagu miisaamo iyo culays wax ku ururaya; miisaanka elektarooniga ah, xakamaynta PLC, bandhig dijitaal ah; t wuxuu leeyahay culeys sax ah, qummanaan saaid ah, xawaare dhakhso badan, howl xakameyn xoog leh, howl fudud, iwm.
Codso qaybaha dibedda laga keenay, waxqabadka lagu kalsoonaan karo; maaraynta fog, xuquuqda isticmaalaha ayaa loo qoondeyn karaa, lagu gaari karaa hababka maaraynta mashruuca aasaasiga ah; xakamaynta caqliga, xakamaynta otomaatiga ah, xakamaynta gacanta ee hal; oo leh kaydinta saamiga, magdhawga otomaatiga ah ee tooska ah, cabbirka xad-dhaafka ah, sixitaanka alaarmiga hooseeya; Qalabku wuxuu leeyahay shaqooyin sida kormeerka hawlgalka, keydinta xogta daruuraha, daabacaadda, iwm.
Budada, biyaha, iyo waxyaabaha lagu daro dhammaantood waxaa lagu cabiraa miisaanka elektarooniga ah; saxnaanta dufcadu way sarreeysaa cabbiraadduna waa sax; sibidhka, dambaska duullimaadka, iyo qoob-ka-cabirka biyaha lagu cabbiro waxaa lagu taageeray xayndaabka saddexda nooc ee dareenka, kaas oo leh qaab dhismeed deggan iyo kalsooni sare; qalabka wax lagu daro ee lagu daro waxaa lagu cabiraa hal dareere hal dhibic
Warshad kasta oo isku dhafan ayaa loogu talagalay macaamiisha!
Qiimaha warshad kasta oo batching ah way kala duwan tahay sababtoo ah qaabab kala duwan!
Haddii aad u baahan tahay inaad ogaato macluumaadka qiimaha faahfaahsan ee xarunta isku darka yar, waxaad si toos ah u wici kartaa qadkayaga iibka: 0086-571-88128581
Marka loo eego qaabeynta aad u baahan tahay, waxaan ku siin doonnaa oraah sax ah oo waxaan kuu oggolaaneynaa inaad ku hesho macluumaadka aad u baahan tahay muddo gaaban!
Dayactirka fiicni ee shubka
1.Hubi in mashiinka iyo deegaanka ku hareeraysan ay nadiif yihiin.
2. Ku nadiifi walxaha ku ururay buusha dusheeda si uu dareemahu caadi ugu noqdo eber.
3.Baadh in saliida saliida ee goob kasta oo saliidayn ah ay kufilan tahay, iyo saliidaynta nidaamka hawadu inay ilaaliso saliida kufilan.
4.Hubi haddii matoorrada iyo qalabka korontadu kululaadaan ama buuqa aan caadiga ahayn, haddii tilmaamuhu caadi yahay, iyo in nidaamka calaamaddu uu sugan yahay.
5.Hubi oo isku hagaaji silsiladda, balanbaalis balanbaalis iyo solenoid waalka si isdaba joog ah si furitaanka iyo xidhitaanku u buuxiyo shuruudaha.
6.Hubi nidaam kasta si joogto ah, waxna ka qabato waqtiga haddii ay jiraan baxsiga boodhka, baxsiga gaaska, daadashada saliida iyo daadashada korantada.
7. Mashiinka wax lagu kariyo iyo dheecaanka dareeraha ah waa in la nadiifiyaa afartii saacba mar si looga hortago la taaban karo haraaga in la xoojiyo oo laga hor istaago hawlgalka caadiga ah.
Wareeg kasta waa inuu sii daayaa biyaha gudaha ee kombaresarada hawada, haanta keydinta hawada iyo shaandhada, oo meesha ka saara cilladaha dhaca inta lagu jiro howlgalka.
9.Balbalada balanbaalista, qasiyaha, solaneid, shaandhada hawada iyo aaladda ceeryaanta saliida ayaa lagu hayaa iyadoo la raacayo tilmaamaha ku habboon.
Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni, Mashiinka Dufcaanta Isugeynta, Isugeynta Nidaamka Dufcadda, Nidaamka Qiyaasta Wadarta Wadarta, Qaybo ka Mashiinka Mashiinka la taaban karo, Nidaamka isugeynta wadarta otomaatiga ah,